Masuuliyiinta Maamulka Somaliland oo u Dhaaraan Dhigtay Afxumada Dawlada Degaanka Somalida Ethiopia iyo Dadweynaheeda – Rasaasa News
Nov 10, 2011 Masuuliyiinta Maamulka Somaliland oo u Dhaaraan Dhigtay Afxumada Dawlada Degaanka Somalida Ethiopia iyo Dadweynaheeda
Weerar ayna ka warhayn dawlada federalka Ethiopia iyo dawlada degaanka Somalida Ethiopia oo Af iyo Adinba ah, kana socda gude iyo dibad, ayay wadaan maamulka ismagacaabay ee Somaliland, kaas oo ah dhul balaadhsi indho la,aan ah.
Ethiopia iyo Somaliya waa laba dal oo daris ah. Waxayna wadaagana xuduud dheer, waxaana mudo dheer dhex taalay colaad ay sabab u tahay gabalka Ogaden ee ay Somalidu degan tahay oo ka tirsan dalka Ethiopia.
Dadka degan gabalka Ogaden ee Somalida, ayaa in badan waxay ka magansanayeen Jamhuuriyada Somaliya in ay xal u keento gabalka Ogaden maamaada ay gabalka degan yihiin dad Somali ah. Nasiib daro dadweynaha Somalida Ogadeeniya waxay fahmeen in ayna arintu u dhaxayn Ethiopia iyo Somaliya, balse ay u dhaxayso Ethiopia iyo Somalida Ogadeeniya.
Waxayna Aqoonyahanka Somalida Ogadeeniya sameeyeen urur Ethiopia xaq iyo xornimo mid uu ka hela sanadkii 1984.
Burburkii Somaliya iyo dhalashadii dawlada federalka ah ee Ethiopia, waxaa dib ugu soo noqday Ethiopia ururadii siyaasadeed ee u dhashay gabalka Ogaden Ethiopia ee ay Somalidu degto.
Ururka ONLF, oo ah dad Ethiopian ayaa sanadkii 1993, waxaa uu aqbalay dastuurka federalka dalka Ethiopia, waxaana uu ku guulaystay doorashadii ka dhacday degaanka Somali Ethiopia [ogaden]. Nasiib daro ururkii ONLF iyo Ethiopia waxaa ka dhax shaqeeyey cadow neceb dadweynaha degaanka Somalida Ethiopia oo xiligaas ay Ethiopia moodaysay in uu yahay daacad.
Cadowgaas aya waxaa uu sahlay in xuduudaha Ethiopia ay soo buux dhaafiyaan dad ka imanaya Jamhuuriyada Somaliya oo ayna dawladi ka jirin mudo dheer.
Beelaha Somaliyeed ee soo buux dhaafiyey xuduuda gudaha Ethiopia, waxay ka faa,iidaysteen colaadii u dhaxaysay ciidamada Ethiopia iyo ururkii ONLF. Waxaana si xun uga faa,iidaystay maamulka Somaliland oo ay ujeedadiisu tahay in ay degaano ka helaan dalka Ethiopia.
Beelaha ka soo jeeda maamulka Somaliland iyo maamulkooduba waxay aaminsan yihiin in degmooyinka Ethiopia ee ay soo buux dhaafiyeen 20kii sano ee colaadu ka socotay degaanka Somalida Ethiopia, ay moodeen degaano ka mid ah gabalka in ay ka tirsan yihiin maamulka Somaliland.
Degmooyinka iyo tuulooyinka Ethiopia ee xiga dhinaca maamulka Somaliland waxaad ku arki calamo iyo calamado uu leeyahay maamulka Somaliland. Marar badana waxaa si sharci daro ah ku soo gala gudaha Ethiopia iyaga oo aan la ogayn masuuliyiinta Somaliland.
Ethiopia iyo mucaaradkeedii ONLF, way heshiiyeen October 2010, waxaana dalka si xad dhaaf ah ugu noqday dadweyne badan oo gude iyo dibadba ka yimid.
Madaxweynaha dawlada degaanka Somalida Ethiopia Sayid Cabdi Maxamed Cumar, waxaa uu safaro ku tagay dalalka reer galbeedka si uu Qurba joogta degaanka ugu sharxo, nabada iyo nolosha ka jirta degaanka.
Arintaasi waxay keentay Masayr ku saabsan nabadgaliyada degaanku helay [colaada cadow baa faa,iida], waxaana ugu daran maamul gabaleedka Somaliland. Waxay sameeyeen boggag Internet ah oo cay iyo af lagaado joogta ah ku haya masuuliyiinta degaanka ugu saraysa iyo waliba dadweynaha degaanka Somalida Ethiopia [sida boggaga radiojijiga, kilil5 iyo somalilandvoices].
Waxaa kale oo maamulka Somaliland ka, bilaabay gudaha degaanada Ethiopia weeraro lagu qaadayo shacabka Ethiopianka ee xoolo dhaqatada ah iyo kuwa degan tuulooyinka uuna Boolisku joogin.
Ciidamada Ethiopia xil baa kasaaran in ay ilaaliyaan xuduuda dalka, talaabana ka qaadaan cidii isku dayda in ay khatar galiso amaanka, nafta iyo hantida wadaniyiinta Ethiopia.
Waxaa wax lala yaabo ah in masuuliyiinta Somaliland ay ugu yeedhaan ciidamada Ethiopia ee ka jira degaanka Somalida Ethiopia FAQASH. Waxaa iyana yaab ah in urur nabad la qaatay dawladiisa ay maamulka Somaliland doonayaan in ay dib colaad ugu soo celiyaan si ay uga faa,iidaystaan.
Waxaan fari lahaa dawlada Ethiopia iyo dadweynaha Somalida Ethiopia in hadii ay awal hore dalka ka difaaci jireen dawlad Somali ah oo ciidama wadata, in maanta ay ka difaacaan dalka dad shacab ah oo aan dawlad lahayn meel walba sharci daro ku soo galaya, kuwaas oo Xaalufinaya geed iyo guuyaba.
Waxaan jeclahay in dadweynaha Somalida Ethiopia ay nala wadaagaan waraaqaha caraabinta ah ee ay isu dirayaan masuuliyiinta maamul gabaleedka Somaliland.
Warqadan waxaa qoray in isku sheegay safiir oo Ingriiska u jooga maamulka Somaliland.